यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? (फरकमत) | सहारा टाइम्स
Home » Bichar » यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? (फरकमत)
यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? (फरकमत)
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत समानुपातिक सबैको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रत्यक्षमा वामठबन्धनले दुई तिहाई मत ल्याएको छ । समानुपातिकको मत परिणाम आउन बाँकी छ । समानुपातिकको प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार पनि वामगठबन्धन सबभन्दा अगाडी देखिन्छ ।
समानुपातिकको मत जोड्दा वामगठबन्धनमा रहेका दललाई अलग अलग राखेर हेर्ने हो भने पनि एमाले पहिलो पार्टी नै हुन्छ भने काँग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो, फोरम नेपाल चौथो तथा राजपा नेपाल पाँचौ दलको रुपमा आउने देखिन्छ ।
वामगठबन्धन र काँग्रेसको मत देशैभरिको हो । यी दलले देशैभरि आआफ्ना उम्मेदवार खडा गरेका थिए । अधिकाँश ठाउँमा वामगठबन्धन नै जितेको छ भने काँग्रेस प्रतिस्पर्धामा रहेको देखिन्छ । फोरम नेपाल र राजपा नेपालले पनि लगभग देशैभरि उम्मेदवारी दिएका थिए तर ती दलका उम्मेदवारहरु तराईका जिल्लाहरु बाहेक अरु ठाउँमा प्रतिस्पर्धामा पनि देखिएको छैन । जानि नजानि ती दुई दल दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र सिमिति भएको देखिन्छ । उनीहरुको जेजस्तै मत अथवा सीट आएका छन् ती दुई नम्बर प्रदेशबाट मात्र आएका छन् ।
मधेशवादी दललाई जसरी दुई नम्बरमा केन्द्रीत गरेको छ, त्यसको कारणले पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । पश्चिम मधेशका मधेशी नेताहरु पार्टीबाट दुरी पनि बढाउँदै लगेका छन् । अर्थात यो चुनावी परिणामले खासगरि पश्चिम मधेशका राजपा नेपालका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । आफू मात्र जित्नका लागि रणनीतिक ढंगबाट राजपा नेपालका नेताहरु दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र चुनावी तालमेल गरे तर झापादेखि कन्चनपुरसम्मको भूभाग माग्दै आएका ती क्षेत्रका नेताहरुको बारेमा केही सोचि दिएन भनि उतातिरका नेताहरुको गुनासो छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आफू राष्ट्रिय पार्टी हो भन्दै हिमालसम्म संगठन रहेको दावी गर्छ । तर न प्रदेशसभामा एउटा सीट ल्याउन सक्यो न प्रनिनिधिसभामै । समानुपातिकको मत आउन बाँकी छ । हिमाल र पहाडबाट फोरम नेपालले समानुपातिकमा कति मत पाएको छ त्यो पनि स्पष्ट हुन्छ नै । तर यी दुई दलले जेजति सीट पाएका छन् ती सबै मधेशको भूभागबाट मात्रै पाएका छन् ।
राजपा नेपालले प्रतिनिधिसभामा दुई नम्बर प्रदेशबाट मात्र प्रतिनिधिसभा ११ र प्रदेशसभामा १५ सीट हात पारेको छ भने फोरम नेपालले प्रतिनिधिसभामा १० र प्रदेशसभामा २० सीट हात पारेको छ । उता फोरम नेपालका लागि एक नम्बर प्रदेशमा जयराम यादवले नाक जोगाई दिएका छन् । उनी मोरगंको पाँच नम्बर प्रदेशबाट प्रदेशसभाको सदस्यमा जितेका हुन् । त्यस्तै रुपन्देही तीनबाट प्रदेशसभामा सन्तोषकुमार पाण्डे जितेका छन् भने कपिलवस्तु एकबाट सहराम यादव र बाँके दुईबाट विजयबहादुर यादव प्रदेशसभामा जितेका हुन् । त्यसैगरि, बाँके दुईबाट प्रतिनिधिसभामा फोरम नेपालका मोहम्मत इस्तियाक राइन जितेका छन् ।
त्यस्तै कैलाली एकबाट राजपा नेपालका रेशम चौधरी प्रतिनिधिसभा र कृष्णबहादुर चौधरी प्रदेशसभामा जितेका छन् । यी दुवैजना टिकापुर आन्दोलनका कारण जिते । त्यो कुरा यहाँ व्यख्या गरिरहनु पर्दैनन् । माथि उल्लेख गरेका मोरगं, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली पनि सप्तरीदेखि पर्सासम्मको भूभाग जस्तै मधेशमै पर्छन् भनि राजपा नेपाल र फोरम नेपालका नेताहरुले दावी गर्दै आएका छन् । तर सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा जितेको सीटभन्दा आधा सीट पनि त्यहाँ जित्न सकेन । राजपा र फोरमका नेताहरु ती जिल्लामा पनि छन् । आन्दोलन र संगठन निर्माणको कार्य त्यतातिरको नेता पनि गरेका छन् तर उनीहरु किन जित्न सकेन त ? मधेशको राजनीतिमा यो गम्भीर विषय बनाएर उभिएको छ ।
यी दुई दलका शीर्ष नेताहरुले पूर्व र पश्चिम मधेशका नेताहरुसँग विभेद गरेको भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । ती दलका सबै शीर्ष नेताहरु दुई नम्बर प्रदेशबाट चुनाव लडे र आफू मात्र जित्नका लागि दुई दलको बीचमा तालमेल पनि गरे । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले त काँग्रेसको पनि समर्थन लिएर चुनाव जिते । अर्थात फोरम नेपाल र राजपा नेपालका नेताहरु आफू मात्र जित्नका लागि दुई नम्बर प्रदेशमा जति मेहनत गरे । जति रणनीति बनाए, त्यति अरु प्रदेश तथा अरु जिल्लाका लागि गरि दिएको भए अरु थुप्रै नेताहरु जित्ने थिए ।
मधेशी दलका शीर्ष नेताहरुको अदुरदर्शिताका कारण मधेश राजनीतिकलाई चाहिने नेताहरु हारेका छन् । सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, गोविन्द चौधरी (नवलपरासी), नरसिंह चौधरी, सूर्यनारायण गणेश, बद्री मण्डल, तरबेज आलम, रामनारायण यादव, मुन्नी मेहता, राजेन्द्र गुप्ता, निवास यादव, रवी दत्त मिश्र, लक्ष्मण थारु, रामप्रसाद दगौरा, राजकुमार यादव, अशोक राइ, मंगलप्रसाद गुप्ता, वकिल मुसलमानलगायतका थुप्रै उम्मेदवारहरु जो राजपा र फोरम नेपालबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । उनीहरु पराजित भए । सायद त्यहाँ पनि दुई दलमा मात्र तालमेल गरेको भए । अथवा कुनै रणनीति बनाएको भए, उनीहरुले यो सर्मनाक हार बेहर्नु पर्दैन्थ्यो ।
एउटा पार्टीमा कुनै निर्णय हुन्छ भने त्यो देशभरै लागु हुन्छ, सबै नेता तथा कार्यकर्ताका लागि लागु हुन्छ । तर यी मधेशी दलले क्षेत्र अनुसार, भूगोल अनुसार, व्यक्ति अनुसार मात्र निर्णय गरेको छ । जसले गर्दा ठूलो क्षति भयो । यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने हो ?
अभिषेकप्रताप शाह, वृजेश गुप्ता, ह्रदयश त्रिपाठी जस्ताले समयमा बुद्धि पुर्याएको कारण उनीहरु विजय भएका छन् । यदि यिनै दलको भरमा बसेको भए सायद उनीहरु पनि पराजयको शिकार हुन्थ्यो । फोरम र राजपा नेपालबाट हारेका नेताहरु दलकै अदुरदर्शिता सोचका कारण हारेको आत्मसमिक्षा गरेका छन् । अगामी दिनमा उनीहरुले के निर्णय लिन्छन् त्यो त समयले नै बताउनेछ ।